Ukwakhiwa Leli gumbi lokuphumula lamalungu lihlose kubaphathi abazimisele ukusebenzisa ubusuku obuhle bomuzi. Akunakusho ukuthi uzozwa okuthile okukhethekile nokuyingqayizivele kulabo abafuna ukuba yilungu futhi abazimisele ukusebenzisa lo mgoqo. Ngaphezu kwalokho, uma uqala ukusebenzisa lapha, ukusebenzisa kanye nenduduzo kuzobamba iqhaza elikhulu kwifomu lokuhlinzwa. Ungase uthole lezi zici ezimbili ezishiwo ngenhla zixakile, futhi ukunikeza ukuthinta okulungile, kwakuyinselelo yethu. Ngempela, lezi "zici ezimbili" zaziyigama eliyisihluthulelo lokuklama leli gumbi lokuphumula.
Ukwakheka Kwezangaphakathi Eyunivesithi Kunguhlobo
Ukwakheka Kwezangaphakathi Eyunivesithi Kunguhlobo Izikhala ze-TED University eziklanywe ngomqondo wesimanje wokuqamba zibonisa ukuqondiswa okuqhubekayo nokwesimanje kwesikhungo se-TED. Izinto zesimanje neze-Raw zihlanganisiwe nengqalasizinda yezobuchwepheshe kanye nokukhanyisa. Okwamanje, imihlangano yesikhala engakaze ibonwe ngaphambili ibekwa phansi. Uhlobo olusha lombono wezikhala zaseNyuvesi luyakhiwa.
Ukwakheka Kwangaphakathi Kwehhovisi IShirli Zamir Design Studio yakhele ihhovisi elisha lakwa-infibond eTel Aviv. Ngemuva kokucwaninga maqondana nomkhiqizo wale nkampani, lo mbono ubungukudala indawo yokusebenza okubuza ngayo imibuzo mayelana nomngcele omncane ohluka ngokoqobo nomcabango, ubuchopho bomuntu nobuchwepheshe kanye nokuthola ukuthi konke lokhu kuxhuma kanjani. Isitudiyo sithungathe imithamo efanelekile yokusebenzisa yomthamo womabili, umugqa kanye ne-void ezosichaza isikhala. Uhlelo lwehhovisi luqukethe amakamelo wemenenja, amagumbi okuhlangana kuwo, ama-salon asemthethweni, indawo yokudlela kanye nephephethi elivulekile, amakamelo wedumbi elivaliwe kanye nendawo yokusebenza evulekile.
Umklamo Wokwakha Izivakashi
Umklamo Wokwakha Izivakashi Iphrojekthi ye- "Barn ngasemfuleni" ihlangabezana nenselelo yokwakha indawo ehlala abantu, isekelwe ekuzibandakanyeni kwemvelo, futhi iphakamise isixazululo esithile sendawo yokwakhiwa kanye nenkinga yokuhlangana komhlaba. I-archetype yendabuko yendlu ilethwa ekudumeni kwezindlela zayo. Ukushiswa komsedari ophahleni kanye nodonga oluhlaza okotshani kufihla lesi sakhiwo otshanini nasezihlahleni zomhlaba owenziwe ngabantu. Ngemuva kodonga lwengilazi kuvela umfula onamadwala.
Ivenkile Yamakha Amakha
Ivenkile Yamakha Amakha Isimo sehlathi lasebusika elinamandla amakhulu saba ugqozi lwale projekthi. Ubuningi bemidwebo yokhuni yemvelo kanye ne-granite ifaka isibukeli emfuleni weplastiki nokubukeka okubonakalayo kwezimpawu zemvelo. Uhlobo lwezinto ezisetshenziswayo zezimboni luthanjiswa ngemibala yethusi ebomvu neluhlaza okotshani. Isitolo siyindawo ekhangayo nokuxhumana kubantu abangaphezu kuka-2000 nsuku zonke.
Calendar 2014 “Botanical Life” Ikhalenda Sonto 26 Juni
Calendar 2014 “Farm” Ikhalenda Mgqibelo 25 Juni
Calendar 2014 “Town” Ikhalenda Lwesihlanu 24 Juni
Ukwakhiwa Indawo Yokudlela Yase-Japan Eyisihlobo Ukwakheka Kwezangaphakathi Eyunivesithi Kunguhlobo Ukwakheka Kwangaphakathi Kwehhovisi Umklamo Wokwakha Izivakashi Ivenkile Yamakha Amakha